Rocket League Sideswipe, yakaziviswa zviri pamutemo kune iOS uye Android | IPhone nhau
Jordi Gimenez | 24/03/2021 22:00 | IPhone mitambo
Pasina kupokana mutambo Rocket League iri kurohwa nevashandisi. Ikozvino kusvika kwepamutemo kwegore rino reSideswipe kunoziviswa, zita remahara reIOS uye iro richazowanikwawo kune vashandisi veApple. Iyi vhezheni itsva yemutambo haina zuva chairo asi ichasvika munguva pfupi.
Mutambo weRocket Rock wave uripo kwenguva yakareba pamapuratifomu emitambo, zvese paPC uye pazvinyaradzo, asi yanga isati yave nguva yekuve "vakasununguka kutamba" iyo yakamutsa kufarira kwemamiriyoni evashandisi. Mutambo uyo kune avo vasingazive unogona kunge uchishamisa, une mamirioni evashandisi akaiswa uye kusvika kweRocket Rock Sideswipe kunodiwa nevakawanda.
Inoitwa nekutamba nhabvu mutambo uchishandisa mota dzinogadziriswa zvizere nemushandisi. Ehe, mutambo unoshamisa wenhabvu, asi uyo wanga uchitonga musika wemitambo kwemwedzi nemamiriyoni evatambi kutenderera pasirese. Mune ino kesi zita idzva rinenge riri remahara nekutenga kwe-mu-app zvakafanana neshanduro yazvino.
Chidzidzo Psyonix chikamu cheEpic Mitambo uye isu tatoziva nezve hukama hwayo neApple. Chero zvazvingaitika, achisiya iyi nyaya yepamutemo padivi, anovandudza anotsanangura mutambo sechinhu chakasiyana nemutambo uripo. Iwe unogona kutamba 1vs1 uye 2vs2 asi maonero ekuona akasiyana zvakasiyana sezvatinoona mumutambo wepamusoro pamusoro.
Ichokwadi mutambo "wakasiyana" kubva kumusoro une mutsindo unobudirira pakati pevadiki uye kwete vadiki vateereri ... Iwo ekubata masimba anovandudzwa sekutsanangura kunoita Psyonix, asi izvi zvinofanirwa kuonekwa gare gare sezvo zvakaoma kuti vakawanda vatambe kubva iyo iPad kana iPhone skrini. Iva zvazvingaite, chiziviso chiri chepamutemo uye ikozvino chasara chete kusimbisa zuva rekutanga.
Iyo alpha yekuyedza vhezheni ichave ichiwanikwa kubva nhasi kune Android zvishandiso muAustralia neNew Zealand. Kubva mukudzidza kunovimbiswa wedzera chikamu chekuyedza kune dzimwe nyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Rocket League Sideswipe, yakaziviswa zviri pamutemo yeIOS uye Android
Kugovera mapfupi kuburikidza neICloud haashande